Iindaba -I-Dongli Lake yokuHamba ngemisebenzi yeQela leZhanzhi
Imisebenzi yaseLongli yokuHamba intaba yeQela leZhanzhi
Bamba izandla, sihambe kunye
Ngo-Epreli, iTianjin igcwele intwasahlobo, amafu akhanyayo kunye nomoya opholileyo. Kule ntwasahlobo, zonke izinto ziyavuseleleka, samkela ikota yethu yokuqala yeTianjin Zhanzhi ye-2021 Dongli Lake ye-12-kilometre yokuhamba ngomsebenzi wokwakha iqela.
Nge-8: 30 kusasa ngoMgqibelo, wonke umntu wafika kwindawo yokuhlangana yeLwandle i-Dongli, ubuso bomntu wonke babuzele luncumo olumnandi, wonke umntu waya edabini ngokulula, ejonge phezulu kwaye elangazelela ukuzama, ngokungathi bayakhwela kwiikhilomitha ezili-12. Ngokufihlakeleyo ndenze ingqondo yam, nokuba sidinwe kangakanani, sonke siya kuhamba sibambene ngezandla ukuya esiphelweni!
Emva kokushiya iqela lethu, ifoto yaqala ngokusemthethweni. Amaqabane aqala ukunyuka iikhilomitha ezili-12, kwaye wonke umntu waxhasana kwaye baqhubela phambili ngokudibeneyo, okunokubonisa ukuqala kwakhona kwabantu bethu abanqwenela, ukubalekela kwibala lomlo ngenjongo yethu efanayo kulo nyaka kwaye siphumelele! Ilanga lalikhanya ngokuqaqambileyo kwaye impepho yeza kancinci. Sahamba sonwabela ubuhle bendalo bungqonge thina. Injongo yayisisiphelo, kodwa wonke umntu wayeyonwabela inkqubo. Wonke umntu wayelunge kakhulu. Kungekudala umntu wahamba iikhilomitha ezili-10 kwaye wathatha iifoto wazilayisha kwindawo yokungena. Abanye bebengamele kukoyiswa, kwaye baqhubeke nomkhosi balugqiba lonke uhambo. Ukuthetha nokuhleka nokuhamba, i-6 yeekhilomitha, i-8 yeekhilomitha, i-10 yeekhilomitha, i-12 yeekhilomitha, yafikelela esiphelweni! Bonke abahlobo bakaZhanzhi boyisile iikhilomitha ezili-12, kwaye akukho namnye ushiyekileyo.
Kolu hambo, wonke umntu waziva amandla omanyano kunye nolonwabo lokungaze anikezele. Kudala sicinga ukuba loluphi uhlobo lwamandla olusivumela ukuba sizoyise? Mhlawumbi kukuzingisa ukuya kwinqanaba, mhlawumbi ukuthembela kwiqela, mhlawumbi…
Ekugqibeleni iseshoni yethu yamabhaso…
Akukho nanye kwezi ebaluleke kangako, kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba wonke umntu uya kuvuzwa xa ethatha inxaxheba!